Seranam-piaramanidina Tiorka: Istanbul - Seychelles- Kaomoro
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina Tiorka: Istanbul - Seychelles- Kaomoro
Enga anie 7, 2018
Taorian'i Maorisy sy Madagasikara tamin'ny sidina entin-dry zareo rehetra, nanokatra an'i Moronosy ao Comoros ny Turkish Airlines manomboka ny 18 Jona. Ny Orinasa Tiorka dia nahazo alalana avy amin'ny Comoros sivily sivily mba handefasana sidina telo isan-kerinandro miaraka amin'ny Airbus A330 hatramin'ny septambra.
Ny Turkish Airlines dia nanambara ny sidina avy any Paris, fa raha te hihazo an'i Moroni any Comoros ny sidina dia hamakivaky an'i Istanbul any Torkia ary Mahe any Seychelles. Manomboka amin'ny volana septambra dia tsy hijanona ao Kaomoro intsony ny Orinasa Tiorka fa hanamora ny rohy avy any Nairobi sy Dar-Es-Salam.
Ny komoro dia nihataka ela tamin'ny faritra eran'izao tontolo izao nefa ankehitriny dia efa manompo orinasa valo: - Air Austral, Ewa, Air Madagascar, Air Tanzania, Ethiopian Airlines, Fly SAX, Kenya Airways, Precision Air ary Int 'Air Iles avy any Anjouan. Nanambara ihany koa ny fikasan-dry zareo South Africa Airways handefa ny asany any Kaomoro saingy mbola manomboka io. Silence Radio amin'ny alàlan'ny Corail Air an'i Erick Lazarus, ny filoha teo aloha sady mpanorina ny Air Bourbon izay maniry ny handefa ny Serivisy Serivisy sy Serivisy isam-paritra avy any Moroni ao Comoros miaraka amin'ny CRJ100 an'ny Bombardier saingy voalaza fa miandry ny fifandraisana lava avy any Marseille France izy. 25 Jona miaraka amin'ny Boeing 767 200ER.
Tetikasa roa hafa no eo amin'ny dingana famolavolana farany. Nzuanair fananan'ny orinasam-pandraharahana vitsivitsy avy any Anjouan, ary i Vigor an'ny Vondrona Hotely avy any Tanzania izay nividy ny Hotel Cristal Itsandra. Mikasa ny hanokatra trano fandraisam-bahiny roa koa izy ireo ao amin'ny Morondava sy ny Ivontoerana Varotra. Manantena ny hiditra amin'ny tontolon'ny Aviation koa izy ireo. Amin'ny lafiny iray, ny AB Aviation dia manantena ny hamerina ny rohy miaraka amin'i Mayotte.
Kapiteny Robert Mari: Air Seychelles sa ilay Seychelles Airline vaovao?
Salwa Razzouk dia mpitantana Resort ao Raffles Seychelles